Gobolka Washington wuxuu helaa $ 2 milyan oo SBA deeq ah si kor loogu qaado dhoofinta ganacsiyada yaryar - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Gobolka Washington wuxuu helaa $ 2 milyan oo SBA deeq ah si kor loogu qaado dhoofinta ganacsiyada yaryar
Ku dhawaad ​​$ 760 milyan oo iib ah ayaa loo aaneynayaa Barnaamijka Balaarinta Ganacsiga Gobolka (STEP) tan iyo markii la aasaasay
OLYMPIA, WA - The Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka (SBA) ayaa ku abaalmarisay Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington sanad tobnaad oo maalgelin ah si ay uga caawiso ganacsiyada yaryar inay u koraan dhoofinta. Deeqda $ 2 milyan ah ayaa qayb ka ah SBA Barnaamijka Balaadhinta Ganacsiga Gobolka (TALLAABO).
Ganacsigu wuxuu u adeegsan doonaa lacagaha si uu u sii wado tiro ka mid ah barnaamijyada kaalmaynta dhoofinta ee guulaystay ee ganacsiyada yaryar oo ay ku jiraan foojarada dhoofinta, taageerada warshadaha oo diiradda saaraya bandhigyo ganacsi oo shaqsiyeed iyo shaqsi ahaan ah, hawlgallo ganacsi, dhacdooyin iibsadaha gudaha iyo tababarka dhoofinta. Ganacsatadu waxay kaloo isticmaali karaan maalgelinta si ay u kordhiyaan joogitaankooda internetka iyada oo loo marayo horumarinta mareegaha ee dhagaystayaasha caalamiga ah iyo ganacsiga elektaroonigga ah. Eeg liiska dhammaystiran ee kharashyada u -qalma halkan.
In ka badan 1032 meheradood oo yaryar oo gaar ah oo ku xeeran gobolka ayaa ka faa'iideystey taageerada STEP maalgelisay tan iyo markii la bilaabay barnaamijka iyada oo loo marayo Xeerka Shaqooyinka Ganacsiga Yaryar ee 2010. Waxay ku guuleysteen ku dhawaad ​​$ 760 milyan oo iib ah, taas oo abuurtay qiyaas lagu soo celinayo maalgashiga ku dhawaad ​​100: 1.
Barnaamijka gobolka Washington wuxuu si joogto ah tusaale ugu yahay guulaha dhammaan gobollada. Maalgelinta sannadkan ayaa mar kale ah tii ugu badnayd ee ay bixiso SBA - mid ka mid ah oo kaliya laba $ 2 milyan oo deeq dawladeed ah.
Iyada oo kororka maalgelinta, Ganacsigu wuxuu taageeri doonaa in ka badan 30 bandhigyo ganacsi iyo hawlgallo sannadka soo socda oo diiradda saaraya qaybaha sida aaladda caafimaadka, sayniska nolosha, aerospace, teknolojiyadda nadiifka ah, badda, difaaca, farsamada cuntada, Internetka Waxyaabaha (IoT), elektiroonigga , iskudhafyo, waxsoosaar sare, sirdoon macmal ah iyo qaar kaloo badan. Ka sokow bandhigyada iyo hawlgallada ganacsiga ee uu hoggaamiyo Ganacsigu, shirkaduhu waxay ka faa'iidaysan karaan shabakadda lataliyaha caalamiga ah ee cusub ee la ballaariyay ee suuqyada muhiimka ah iyo barnaamijka foojarka dhoofinta si ay u daboosho kharashaadka lagu qabanayo ganacsiga caalamka.
"Dhoofintu waxay weli fursad weyn u tahay ganacsiyada yaryar ee dhammaan gobolka Washington oo raadinaya inay koraan iyagoo garaacaya macaamiisha cusub iyo suuqyada adduunka oo dhan," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. “Maalgalintan STEP waxay noo oggolaanaysaa inaan sii wadno taageeridda shirkadaha laga yaabo inaysan haddii kale haysan kheyraadka lagu hormarin karo cilaaqaadka oo aan ku dhex soconno caadooyinka iibinta alaabtooda iyo adeegyadooda dibedda, gaar ahaan jawiga ganacsi ee maanta adag.”
“Deeqda STEP ee aan helnay waxay gabi ahaanba kaalin ku lahayd kordhinta iibka badeecadda annagoo alaabtayada u turjumnay luqadaha hooyo si aan ugu sii fidno Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Netherlands iyo Spain. Barnaamijkan wuxuu aad ugu fiican yahay ganacsiyada yaryar ee sidayada oo kale ah, ”ayuu yiri Alan Blackford, COO oo ka tirsan Culinary Woodcraft LLC.
“Barnaamijka STEP wuxuu ahaa mid waxtar u leh shirkadeena. Taageerada aan ka helnay barnaamijka Voucher Export Voucher ayaa albaabada u furtay shan dal oo Afrikaan ah, ”ayuu yiri Ivan Lumala, COO ee Adeegyada Teknolojiyadda Tellistic, oo ah shirkad IT ah oo ku takhasustay bixinta la -talinta teknolojiyadda, horumarinta softiweerka, falanqaynta xogta iyo xalka AI ee xilligii dhijitaalka ahaa . Teknolojiyadda Tellistic -ga ayaa adeegsatay barnaamijka STEP si ay u daboosho safar ganacsi oo caalami ah iyo inay u cusbooneysiiso warbaahintooda suuqgeynta iibka cusub ee suuqa.
Macluumaadka ku saabsan foojarada dhoofinta STEP iyo kaalmada dhoofinta ganacsiga yar yar, kala xiriir Nicole Gunkle at Nicole.gunkle@commerce.wa.gov. Si aad wax badan uga ogaato barnaamijyada kale ee Ganacsiga ee ka caawiya ganacsiyada inay koraan, ballaariyaan oo ay helaan gobolka Washington, fadlan booqo www.choosewashingtonstate.com. .
horumarinta dhaqaalahaGanacsiga caalamiga ahWar-saxaafadeedganacsiga yaryarWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Sida loo: Warbixinta Xaaladda Nolosha ee Hadda Shuruudaha tallaalka iyo maaskaro ee Ganacsiga →